RASMI: UEFA oo ku dhawaaqday garoon lagu marti galinayo finalka Champions League xili ciyaareedka 2019/2020 – Gool FM
(UEFA) 24 Maajo 2018. Xiriirka Kubadda Cagta Yurub (UEFA) ayaa Khamiistii maanta ku dhawaaqay Garoomada marti gelin doona finalka Champions League ee xili ciyaareedka 201920.
Sabtida waxay isku wajihi doona kooxaha Liverpool iyo Real Madrid, kulanka finalka finalka UEFA Champions League ka dhici doona dalka Ukraine caasimadiisa Kiev.
Xili ciyaareedka soo aadan ee 2018/2019 waxaa marti gelin doona finalka Champions League garoonka Wanda Metropolitano ee koxda Atlético Madrid.
Guddiga Fulinta ee Xiriirka Kubadda Cagta ee Yurub (UEFA) ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Kiev ka hor finalka maalinka Sabtida waxaana uu xaqiijiyay goobaha uu ka dhici doono finalada tartamada yurub ee 2020.
Finalka UEFA Champions League ee Xili ciyaareedka soo aadan ee 2019/2020 garoonka Ataturk Olympic Stadium magaalada Istanbuul ee dalka Turkey.
Halka sidoo kale finalka UEFA Europa League uu marti geli doono garoonka Arena Gdańsk ee dalka Poland, dhinaca kale kulanka UEFA Super Cup waxaa marti galin doono Estádio do Dragão magaalada Porto ee Portugal.
Guddiga Fulinta ayaa sidoo kale xaqiijiyay jadwalka tartanka Euro 2020, ee ka bilaabmi doona garoonka magaalada Roma ee Stadio Olimpico Jimco (June 12-keeda). Finalka wuxuu ka dhici doonaa garoonka Wembley ee magaalada London 12-ka July.